Isam-ponina 14 295 mponina
Tsarahonenana Sahanivotry dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Antsirabe Ii, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 14295 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 11835 ary ny kaodin-distrika dia 118
Ny anjaran'ny tantsaha mampiasa zezika simika dia 50-75%. Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia pomme de terre. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia autre fruit. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia vary. Ny isan'omby dia 2100. Ny isan'ny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelan'ny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia pomme de terre. Ny entana lafo vidy indrindra dia autre fruit. 15 isan-jaton'ny tanimbary no voatondraka amin'ny tohidrano na paompy. 1864 no isan'ny ombivavy be ronono. 98 ny mponina no miasa tany. 2 ny mponina no miasa amin'ny fiompiana. 520 no isan'ny kisoa.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia fiara lehibe. Ny faharetan'ny dia mankany amin'ny renivohi-paritany dia 4 ora. Ny fotoam-pitaterana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 5 ora. Ny lalan-tany dia azo aleha mandavan-taona. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 10000 Fmg. Misy fikambanan'ny mpampiasa lalan-tany ao. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny haintany dia 9000 Fmg.
Ny isan'ny vono olona tanatin'ny taona 1999-2001 dia 1. Ny isan'ny vakitrano tanatin'ny taona 1999-2001 dia 1. Ahitana zandary ao amin'ilay kaominina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsarahonenana_Sahanivotry&oldid=797216"